ANTOKO MALAGASY MIARA-MIAINGA : Nanolotra soson-kevitra momba ny fihanaky ny pesta
Namoaka fanambarana ny antoko Malagasy Miara-Miainga (Mmm) afak’omaly. Fanambarana nanoloran’izy ireo soson-kevitra manoloana ny fiparitahan’ny valan’aretina pesta amin’izao fotoana izao. 25 octobre 2017
Teny am-piandohan’ilay fanambaràna dia notsindrian’ireo mpikambana ao anatin’ny antoko fa tsy mahita mazava izay fandraisan’andraikitra hentitra ataon’ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao ka tsy mahagaga raha mbola tsy voafehy ity fihanaky ny valan’aretina ity hatreto. Nambarany ihany koa fa tsy mahomby mihitsy ny mpitondra amin’ity ady mahamain’ny pesta atrehin’ny firenena ity.
« Miteraka korontana eto anivon’ny firenena ny zava-misy ankehitriny manoloana ny fomba entin’ny fanjakana miady amin’ny valan’aretina pesta », hoy ny voalaza teny am-piandohan’ilay fanambarana. « Tsy voafehy ny aretina satria tsapa fa tsy misy fandraisan’andraikitra hentitra, feno fitavozavozana ary misavoritaka ny fomba fiasan’ny fanjakana.
Miteraka olana eo amin’ny ray aman-drenin’ny mpianatra sy ny tompon’ny sekoly ny fanemorana lava ny fidiran’ny mpianatra sy ny fampiatoana ny fampianarana mandritra ny fotoana lava sy tsy voafetra. Miteraka fatiantoka ihany koa izany ho an’ireo mpikarakara lanonana sy ireo artista maro, ireo mpikarakara fifaninanana ara-panatanjahan-tena sy mpanao fanatanjahan-tena.
Toy izany ihany koa ny lafiny ara-toekarena raha tsy hilaza afatsy ny lafin’ny fizahantany fotsiny ary indrindra nanome endrika ratsy ny firenentsika eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena », hoy hatrany ilay fanambarana nataon’ny antoko Mmm afak’omaly. Manoloana izany dia nanome soson-kevitra ny Malagasy Miara-Miainga.
Ohatra azo tsapain-tanana nomen’izy ireo tamin’izany ny fandraisan’andraikitra nataon’ny olom-boafidy teny amin’ny Kaominina Masindray ao Avaradrano. Ity farany dia nametra ny fivezivezen’ny olona sy nanakatona ireo sekoly, ny birao rehetra ary ny toerana rehetra fifezivezen’ny olona nandritra ny telo andro ka nandrarahana fanafody.
Teny am-pamaranana ilay fanambaràna dia notsindrian’ireo mpikambana ao anatin’ny antoko fa « fiaraha-miainga amin’ny alalan’ny fiaraha-mientana eny ifotony sy ny fitsinjaram-pahefana sy amin’ny endrika fitsinjaram-pahefana tena izy no vahaolana amin’izao tsy fandehan’ny fiainam-pirenena araka ny tokony ho izy izao ».